IDayimane Roost - Bicheno - I-Airbnb
IDayimane Roost - Bicheno
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguStephen & Lindsay
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uStephen & Lindsay iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu esemaphandleni entle nebukekayo yesiqithi saseDayimane nonxweme olukhulu
Eli khaya lipholileyo linamagumbi okulala ayi-2 - Igumbi lokulala eliphambili elinendawo yokulala kunye negumbi lokulala lesibini elinegumbi lokuhlambela lalo. Lungiselela ukulala abantu abayi-4, uthe zava, kunye nendawo yokuphumla/indawo yokutyela enamacango okutyibilika emgangathweni .
IBicheno inezinto ezininzi onokuzifumana, ukusuka kumalwandle amhlophe aqaqambileyo, ii-penguin ezisemgangathweni kunye nokukhenketha ngephenyane lase-Tassie, isikhephe esisezantsi seglasi kunye neendlela zokuhamba.
Izimvo eziyi-3 167
Izitshixo ziyafumaneka xa zilungiselelwe nabasebenzi baseBicheno Vacation Rentals
Inombolo yomthetho: 2016/00071